बाइबलका कथाहरू: दस विपत्ति - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
यी चित्रहरू हेर त। तिमीले हरेक चित्रमा यहोवाले मिश्रमाथि ल्याउनुभएको एउटा-एउटा विपत्ति देख्छौ। पहिलो चित्रमा हारूनले नील नदीलाई आफ्नो लट्ठीले हानिरहेको छ। उसले त्यसो गर्ने बित्तिकै नदीको पानी रगत भयो। माछाहरू मरेर नदी नै गन्हाउन थाल्यो।
यसपछि यहोवाले नील नदीबाट भ्यागुताहरू पठाउनुभयो। चुल्हामा, पीठो मुछ्‌ने भाँडामा, पलङमा जताततै भ्यागुतै-भ्यागुता भए। मिश्रीहरूले मरेका भ्यागुता थाकका थाक लगाए। कुहिएको भ्यागुताले गर्दा पूरै देश गन्हाउन थाल्यो।
त्यसपछि हारूनले फेरि आफ्नो लट्ठीले भुइँको धूलोमा हिर्कायो र धूलो भुसुनै भुसुना भयो। भुसुना भनेको टोक्ने साना कीराहरू हुन्। भुसुना मिश्रमाथि आइलागेको तेस्रो विपत्ति थियो।
यसपछि आएका बाँकी विपत्तिहरूले इस्राएलीहरूलाई केही पनि गरेन। मिश्रीहरूलाई मात्र दुःख दियो। चौथो विपत्ति, ठूल्ठूला झिंगाहरूको विपत्ति थियो। सबै मिश्रीहरूका घरभित्र जताततै झिंगाहरू भन्कन थाले। पाँचौं विपत्ति जनावरहरू माथि आइलाग्यो। मिश्रीहरूका थुप्रै गाईवस्तु, अनि भेडा-बाख्राहरू मरे।
मोशा र हारूनले अलिकता खरानी लिएर त्यसलाई हावामा उडाएपछि छैटौं विपत्ति सुरु भयो। यसले गर्दा मान्छे अनि जनावर दुवैको जीऊमा खटिरै खटिरा निस्कन थाल्यो।
यो विपत्ति सकिने बित्तिकै मोशाले आफ्नो हात आकाशतिर उचाल्यो र यहोवाले आकाशमा बिजुली अनि गर्जन गराउनुका साथै असिना पठाउनुभयो। मिश्रमा यत्ति नराम्रो गरी असिना पहिले कहिल्यै परेको थिएन।
आठौं विपत्ति सलहहरूको विपत्ति थियो। मिश्रमा योभन्दा अघि अथवा यसपछि पनि यत्ति धेरै सलहहरू कहिल्यै आएका थिएनन्। असिनाले बाँकी राखेका सबै कुरा यी सलहहरूले खाएर सोत्तर पारे।
नवौं विपत्तिचाहिं अन्धकार थियो। तीन दिनसम्म मिश्र देशभरि अन्धकार छायो। तर इस्राएलीहरू बसेको ठाउँमा चाहिं उज्यालो थियो।
अन्तमा, परमेश्वरले आफ्ना मान्छेहरूलाई आ-आफ्नो घरको ढोकाको चौकोसमा बाख्रा अथवा भेडाको पाठोको रगत छम्कन लगाउनुभयो। अनि त्यही रात परमेश्वरको स्वर्गदूत मिश्र देश भएर गए। स्वर्गदूतले जुन-जुन घरमा रगत देखे, त्यस घरमा कसैलाई मारेनन्। तर ढोकामा रगत नभएका घरहरूमा चाहिं परमेश्वरको स्वर्गदूतले मान्छे र जनावर दुवैको जेठो सन्तानलाई मारे। मिश्रीहरूले भोगेको यो १० औं विपत्ति थियो।
यो अन्तिम विपत्तिपछि फिरऊनले इस्राएलीहरूलाई देश छाडेर जान आतुर लगायो। परमेश्वरका सबै जनहरू मिश्र देश छोडेर जान तयार थिए। उनीहरू त्यही रात मिश्रबाट निस्के।
प्रस्थान अध्याय ७ देखि १२ सम्म।
यहोवाले मिश्रमाथि ल्याउनुभएको विपत्तिहरूमध्ये तीनवटा के-के थिए, चित्र हेरेर बताऊ।
बाँकी सात विपत्ति पहिलो तीन विपत्तिभन्दा कसरी फरक थियो?
चौथो, पाँचौं अनि छैटौं विपत्ति के थिए?
सातौं, आठौं अनि नवौं विपत्ति हुँदा के भयो, वर्णन गर।
दसौं विपत्ति हुनुअघि यहोवाले इस्राएलीहरूलाई के गर्न अह्राउनुभयो?
दसौं विपत्ति के थियो? अनि त्यसपछि के भयो?
प्रस्थान ७:१९-८:२३ पढ्नुहोस्।
मिश्रका जादूगरहरूले यहोवाले ल्याउनुभएको पहिलो दुइटा विपत्तिको नक्कल गरे तापनि तेस्रो विपत्तिपछि तिनीहरूलाई के स्वीकार्न करै लाग्यो? (प्रस्थ. ८:१८, १९; मत्ती १२:२४-२८)
यहोवा आफ्ना जनहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चौथो विपत्तिबाट कसरी देखिन्छ? अनि यो घटनाले गर्दा भविष्यमा “महा संकष्ट” आउँदा पनि के हुनेछ भनी परमेश्वरका जनहरू ढुक्क हुन सक्छन्? (प्रस्थ. ८:२२, २३; प्रका. ७:१३, १४; २ इति. १६:९)
प्रस्थान ८:२४; ९:३, ६, १०, ११, १४, १६, २३-२५ र १०:१३-१५, २१-२३ पढ्नुहोस्।
दस विपत्तिले गर्दा कुन दुई समूहबीचको भिन्नता स्पषटै देखियो र अहिले यी दुई समूहप्रति हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ? (प्रस्थ. ८:१०, १८, १९; ९:१४)
यहोवाले शैतानलाई अहिलसम्म रहन दिनुभएको कारण बुझ्न प्रस्थान ९:१६ ले कसरी मदत गर्छ? (रोमी ९:२१, २२)
प्रस्थान १२:२१-३२ पढ्नुहोस्।
निस्तार चाडले कसरी थुप्रैको छुटकाराको निम्ति बाटो खोल्यो र निस्तारले कुन कुरालाई संकेत गर्दैथ्यो? (प्रस्थ. १२:२१-२३; यूह. १:२९; रोमी ५:१८, १९, २१; १ कोरि. ५:७)